काठमाडौँ ७ मा आक्रामक बन्दै रामविरको चुनावि प्रचार, के छन् त जित्ने आधारहरु ? पढ्नुहोस उनको महत्वपूर्ण अन्तवार्ता — Motivate News
काठमाडौँ ७ मा आक्रामक बन्दै रामविरको चुनावि प्रचार, के छन् त जित्ने आधारहरु ? पढ्नुहोस उनको महत्वपूर्ण अन्तवार्ता
Posted on November 13, 2017 by motivate news
काठमाडौँ – मंसिर २१ गते दोश्रो चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्तगत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यका लागि संयूक्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमालेका नेता रामविर मानन्धर चुनावि मैदानमा छन् । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी नेतृ हिसिला यमीलाई पराजित गरेर राष्ट्रिय राजनितिमा चर्चामा आएका मानन्धरलाई नै वाम गठबन्धनले यस पटक पनि प्रतिनिधि सभाका लागि उमेद्वार वनाएको छ र उनी यतिखेर जित सुनिश्चितताका लागि आफ्ना एजेण्डा र भावि योजना लिएर मतदाता कहाँ पुगिरहेका छन् । उनै प्रतिनिधी सभा सदस्यका लागि काठमाडौँ ७ का उमेद्वार मानन्धरसंग हामीले केहि कुराकानि गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानिको संपादित अंश ।
वाम एकताको सबैभन्दा प्रचारक कांग्रेस नै भएको छ । नेपाल चीन, कोरिया बन्न भन्ने हावा फैलाउनु आवश्यक छैन । नेपाल नेपाल नै बन्छ । दक्षिणपन्थीहरुको स्वभाव नै गलत प्रचार गर्न खोज्ने हुन्छ । उनीहरु नेपाल उत्तर कोरिया हुन्छ भन्ने डर देखाउन चाहन्छन् । उनीहरुले कम्युनिष्टको गलत हावा फैलाउने गर्छन् । तर २०५१ सालमा आएर मात्र जनताले बुझे । कम्युनिस्टले शासन गर्न पायो भने मात्र देश संमृद्व बन्छ भन्ने अनुभव गर्न पाए । २०५१ को नौ महिने कम्युनिस्टको शासनले जनताले ठूलो आनन्दको महसुश गर्न पाएका छन् । आर्थिक समृद्वको चरमचुलीमा पुगेको चीनजस्तो नेपाल बन्न सक्नु ठूलो कुरा हो । संविधानको प्रस्थावना नै लेखिएको कुरा राम्रोसँग पढ्न म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
संविधानमा व्यवस्था भएको कुराले नै यो मुलुकमा तत्काल कुनै पनि हालतमा साम्यवाद आउँदैन भन्ने कुरा प्रस्पट छ । सयवर्षपछि साम्यवाद ल्याउन सकिएला तर तत्काल यो संविधान रहेसम्म साम्यवाद सम्भव छैन् । त्यही संविधान अनुसार चलेको सरकार त्यस सरकारलाई समर्थन गर्ने नेकपा माओवादीका मन्त्रीहरु पनि अहिले पनि बहाल हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मन्त्री गन्न आउँछ होला नि । किन भने यो संविधानमा हामीले समाजवाद बाहेक कल्पना नै गरेका छैनौ । समाजवादपछि हुने नै साम्यवाद हो । साम्यवाद भनेको नै रामराज्य हो । रामराज्यको कल्पना गर्नु अनुचित होइन । त्यसैले कांग्रेसका साथीहरु र मुख्य गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु । सय वर्षपछि कल्पना गरिएको रामराज्यबाट अहिले नै आत्तिनु पर्ने जरुरी छैन ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार, समाज | Tagged Rambir manandhar | Leaveareply